कसरी पाउँदैछन् नेकपाका जिल्ला कमिटीले पूर्णता ? यस्तो छ जिल्ला सदस्य बन्ने मापदण्ड - Nepal's Digital News Paper
कसरी पाउँदैछन् नेकपाका जिल्ला कमिटीले पूर्णता ? यस्तो छ जिल्ला सदस्य बन्ने मापदण्ड
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाईलाई उर्दुत गर्ने हो भने फलामे ढोका फोरेर नेकपाका ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव बाहिर निस्किएका छन् । तरपनि जिल्ला कमिटी पूर्णरुपमा गठन भइसकेको छैन ।
जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएपछि जिल्ला कमिटी सदस्यको टुंगो लगाउने मापदण्ड तयार गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश कमिटीलाई पठाउन लागेको मापदण्डमा पुराना साविक जिल्ला सदस्यहरु यथावत रहनेछन् । सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक भए उनीहरुलाई विदा गर्ने, नयाँ सदस्यता थप्दा वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा थप्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
नयाँ थप्दा र केही पुरानालाई विदा गर्दा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले टुंग्याउने भएको छ । केन्द्रबाट मापदण्डको पत्र पुगेलगतै प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटीसँग सदस्यहरुको नामावली माग्ने भएका छन् । जिल्ला कमिटीले पठाएको मापदण्डका आधारमा प्रदेश कमिटीले सदस्यहरुको टुंगो लगाउने भएको छ ।
नेकपाका सवै जिल्ला कमिटीहरु बैशाख महिनाभरी गठन गरिसक्ने पार्टी केन्द्रले प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिन लागेको छ । अबको केही दिनमै प्रदेश कमिटीमा केन्द्रको पत्र पुग्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाएपछि नगर र गाउँ कमिटीले गठन हुनेछ । नगर र गाउँ कमिटी जिल्ला कमिटीले मापदण्ड बनाएर छनोट गर्नुपर्ने छ ।